Fanambaràna 22 - Ny Baiboly
Fanambaràna toko 22
6Ary hoy ilay anjely tamiko: Marina sy mahatoky ireo teny ireo; ary ny Tompo Andriamanitry ny fanahin'ny mpaminany no efa naniraka ny anjeliny, mba hanambara amin'ny mpanompony ny zavatra rehetra tsy maintsy ho tonga faingana. - 7Indro, avy faingana aho. Sambatra izay mitandrina ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity.
8Izaho Joany no nahita sy nandre ireo zavatra ireo. Nony efa nahita sy nandre izany aho, dia nidaboka teo an-tongotr'ilay anjely naneho izany tamiko, mba hiankohoka taminy; 9nefa hoy izy tamiko: Tandremo, aza manao izany, fa mpanompo namanao ihany koa aho, sy naman'ny mpaminany rahalahinao, mbamin'izay mitandrina ny teny amin'ity boky ity; Andriamanitra no tsaohy.
10Ary hoy izy tamiko: Aza asiana tombo-kase ny teny faminaniana amin'ity boky ity, fa efa antomotra ny fotoana. 11Ka ny olon-dratsy avelao hanao ratsy ihany; izay maloto avelao hihamaloto ihany. Fa ny olo-marina kosa, aoka hihamarina kokoa, ary ny efa masina aoka hihamasina kokoa.
12Indro, avy faingana aho; efa eo am-pelatànako ny valy hamaliako ny olona rehetra araka ny asany avy. 13Izaho no Alfà sy Omegà, ny voalohany sy ny farany, ary ny fiandohana sy ny fiafarana. 14Sambatra izay manasa ny akanjony amin'ny ràn'ny Zanak'ondry, mba hananany fahefana amin'ny hazon'aina, sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. 15Fa any ivelany kosa ny alika sy ny mpimasy, ny mpinjangajanga, ny mpamono olona, ny mpanompo sampy, mbamin'izay rehetra tia lainga sy mpandainga.
16Izaho Jesoa no naniraka ny anjeliko hanambara ireo zavatra ireo aminareo ho an'ny Eglizy. Dia izaho ilay solofo sy taranak'i Davida ary kintana mamirapiratra fitarika andro.
17Ary hoy ny Fanahy sy ny Ampakarina: Avia! Aoka izay nandre koa hanao hoe: Avia. Ary aoka ho avy izay mangetaheta, mbamin'izay maniry izany, ka hisotro maimam-poana amin'ny ranon'aina!
18Ary izao no lazaiko amin'izay rehetra mandre ny teny faminaniana amin'ity boky ity: Raha misy manampy azy, dia hasian'Andriamanitra amin'ny loza voasoratra amin'ity boky ity. 19Ary raha misy kosa manesotra teny amin'ity boky faminaniana ity, dia hesorin'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazon'aina sy ny tanàna masina voasoratra amin'ity boky ity.
20Izao no lazain'ilay manambara ireo zavatra ireo: Eny, avy faingana aho. Amena! Avia, ry Jesoa Tompo!
21Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'i Jesoa-Kristy Tompontsika. Amena. >